DrawaStickman: EPIC2Free 1.2.1.53 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 1.2.1.53 လြန္ခဲ့ေသာ5ရက္က
ဂိမ္းမ်ား စြန္႕စားခန္း DrawaStickman: EPIC2Free
DrawaStickman: EPIC2Free ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
5 Webby ဆု၏ ** Winner - တ Stickman franchises ကိုခပ် **
ထိုကမ္ဘာလုံးပတ်လည် ** ကစားသန်း 100 ကျော် Times သတင်းစာ **
သင့်ရဲ့ခဲတံဖမ်းပြီးနှင့်အခမဲ့ပထမဦးဆုံး3အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူ, သေးအရှိဆုံးဖန်တီးမှု Drawing တစ်ခု STICKMAN စွန့်စားမှုအဘို့အဆင်သင့်ရ!
သငျသညျနက်နဲသောအရာဖြစ်ပေနှင့်အံ့သြစရာ, ပုံမှန်မဟုတ်သောသတ္တဝါများနှင့်ထူးခြားတဲ့ပဟေဠိ၏အပြည့်အဝတစ်ဦးမှော်ပုံပြင်စာအုပ်ကိုပြည်ကိုဝင်ရောက်အဖြစ်စိတ်ကူးစိတ်သန်း, သော့ကိုပါ! သင့်ကိုယ်ပိုင်မူရင်း stickman Create ပြီးတော့ဆွဲတစ်ဦးက STICKMAN အတွက်အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်ကြည့်ရှု: EPIC 2! သည်လျှို့ဝှက်သော့ဖွင့်တိုင်းဆွဲစုဆောင်းနှင့်ကမ္ဘာနှင့်သင်၏တီထွင်ဖန်တီးမှုဝေမျှဖို့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုစိန်ခေါ်မယ်!
ဘဝကိုဖို့သင့် Drawing ဆွဲခေါ်ပါ!
သင်သည်သင်၏ကိုယ်ပိုင်ထူးခြားတဲ့ရှုထောင့်ကနေ Stickman ဆွဲအဖြစ်သင့်တီထွင်ဖန်တီးမှုတိုက်ဖျက်မည်, ပြီးတော့သင့်ရဲ့ကာတွန်းသူရဲကောင်းသင်တို့မျက်မှောက်၌အသက်ရှင်ခြင်းသို့ရောက်ကြည့်ရှု! သင့်ရဲ့ sketchbook အတွက်န့်အသတ်ရေးဆွဲချွေတာ, အဆွေခင်ပွန်းနှင့်အတူသူတို့ကိုမျှဝေအားဖြင့်တိုင်းစိတ်ကူးတစ်အဖြစ်မှန် Make!
အချိန်အားဖြင့်တစ်ဦးဘေးအန်တရာယျနဲ့ခရီးစတင်! သင့်ရဲ့ Stickman ကိုခပ်နှင့်မိတ်ဆွေတစ်ဦးဖန်တီး! သို့သော်လည်းသင်တို့မဟာမိတ်အပေါ်သို့ကျရောက် .disaster ... သတိပေးခဲ့သည်ခံရ! ဒါဟာသူရဲကောင်းဖြစ်လာရန်သင့်အားတက်ပဲ! သင့်ရဲ့လက်တွဲဖော်ကိုကယ်တင်မယ့်ရှာပုံတော်အတွက် EPIC2မှော်ကမ္ဘာမှတဆင့်သင့်ရဲ့လမ်းစီမံကိုင်တွယ်!
သင့်ရဲ့ sketchbook အတွက်န့်အသတ်ရေးဆွဲ Create ကယ်တင်! သင့်ရဲ့စွန့်စားမှုတလျှောက်လုံးသူတို့ကိုသုံးပါ!
သူငယ်ချင်းတွေနဲ့အတူ Draw SHARE, လက်ခံ
သစ်ဝေစုအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူ, သငျသညျယခုသင်၏မိတ်ဆွေများရန်သင့်ဖန်တီးမှုပေးပို့နိုငျသညျ! ထို့နောက်မိမိတို့ကိုယ်ပိုင်မော်ကွန်း Adventures ၌သင်တို့၏ရေးဆွဲကိုသုံးနိုင်ပါလိမ့်မည်!
လက်မှတ်ရေးထိုးထုတ်လူ့မှင်စာများ, လျှာကို-lashing ဖားမီး-အသက်ရှူခြင်းသည်နဂါးနှင့် BIG လူကြီးတွေဟာအဲဒီမှာရှိတယ်ဆန့်ကျင်ချွတ်ရင်ဆိုင်ရ! အားလုံးအသစ်ကလူကြမ်းအဖြစ်အပြင်းအထန်စဉ်သင်, စိတ်ဝင်စားဖွယ်စိန်ခေါ်မှုများနှင့်ပဟေဠိဖြေရှင်းပေးရန်သင်၏ကိုယ်ပိုင်မဟာဗျူဟာကိုသုံးရမယ်!
သငျသညျအသီးအသီးရောင်စုံပတ်ဝန်းကျင်စူးစမ်းသကဲ့သို့, သငျသညျကိုအောင်မြင်စွာလမ်းတစ်လျှောက်ရှိသမျှအတားအဆီးကိုကျော်လွှားနိုင်ရန်အတွက်ခဲတံနှင့် tools တွေ drawing တစ်ခုဌန်မှရွေးချယ်ပါ။
နယူး features နဲ့အဆင့်မြှင့်တင်မှုများခဲတံအရွယ်အစားအမျိုးမျိုးနှင့်အတူ, သင်ကပိုကြီးအရောင် palette ကနေရှေးခယျြဖို့ခွင့်ပြုပါ။ သစ်ဝေစုအင်္ဂါရပ်နှင့်အတူသင့်သူငယ်ချင်းများရန်သင့်ရေးဆွဲပေးပို့! , လြှို့ဝှကျအရောငျ Buddy သော့ဖွင့်ပဟေဠိကိုအပိုင်းပိုင်းနေရာချထားနှင့်ဝါယာကြိုးအသစ်ဆွဲခဲတံပျော်မွေ့, ကြက်ဥနှင့်ရေခဲပြင်! ဒါဟာသင်အားဖြင့်ကိုယ်ပိုင်အဘယ်သူမျှမကအခြားကဲ့သို့အတွေ့အကြုံ, ပါ!
တစ်ဦးက STICKMAN ကိုဆွဲသည်: EPIC2သင်တို့အဘို့အစောင့်ဆိုင်းနေခဲ့ဖူးတဲ့ဇာတ်ကားသည်နှင့်ရောနှော avid ဂိမ်းကစားခြင်းနှင့်ဖန်တီးမှုစိတ်ထဲတွင်မှဖျော်ဖြေရေး၏နာရီကိုဆက်ကပ်ဖို့သေချာပါ!
DrawaStickman: EPIC2Free အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
DrawaStickman: EPIC2Free အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
DrawaStickman: EPIC2Free အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
DrawaStickman: EPIC2Free အား အခ်က္ျပပါ
ledjfjsx စတိုး 10 47.67k
DrawaStickman: EPIC2Free ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း DrawaStickman: EPIC2Free အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 1.2.1.53
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ http://www.hitcents.com/privacy-policy
Release date: 2019-07-12 18:29:43
လက်မှတ် SHA1: 32:A9:AC:27:58:1B:65:51:2E:8C:62:CE:20:67:3A:55:E6:DE:8F:0B
ထုတ်လုပ်သူ (CN): Jonathan Peppers
အဖွဲ့အစည်း (O): Hitcents
နယ်မြေ (L): Bowling Green
ပြည်နယ်/မြို့တော် (ST): KY
DrawaStickman: EPIC2Free APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ